Orinasa mpamokatra Gelatin kilasy fanafody any Sina | Yasin
Gelatin dia naneho ny fahaizany manatsara ny fampiharana ho an'ny indostria sy ny fanafody fanafody. Izy io dia ampiasaina hanamboarana akorandriaka kapsily mafy sy malefaka, takelaka, granulation, solosaina soloina fanafody, fanampiana ara-tsakafo / ara-pahasalamana, syrups sns. Mora levona izy io ary ampiasaina ho fonosana fiarovana voajanahary ho an'ny fanafody. Noho ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena momba ny fahasalamana sy ny fitomboan'ny fangatahana vokatra ara-pahasalamana dia ilaina ny fiarovana ny gelatin sy ny fepetra takiana mafy amin'ny fizotry ny famokarana. Izay foana no tazominay sy hatsarantsika.
Herin'ny Jelly Bloom 150-260Bloom
Transparency MG ≥500
Isan'ny bakteria tanteraka CFU / h ≤1000
E.Coli MPN / h ratsy
Ny gelatin dia mampihatra ny fomba fitsaboana azy amin'ny gelatin rehetra ampiasaina amin'ny capsule gelatin malefaka, na ho an'ny fanafody, ny sakafo, ny hatsatra na ny fampiasana loko-ball. Mihevitra izahay fa misy ny fangatahana mitaky fitakiana mitovy ary mifantina tsara ny gelatin mba hanomezana fahaiza-manao miverimberina.
Gelatin R&D Center dia nandalina ny fampiharana gelatin tamina kapsily malefaka nandritra ny taona maro ary nahazo traikefa manan-danja sy vahaolana amin'ny famahana olana, indrindra amin'ny fisorohana ny fifandraisana amin'ny iray amin'ireo akora mavitrika, manakana ny vokatry ny fahanterana, ny fanamafisana ary ny famoahana.
Ao amin'ny kapsily mafy, gelatin dia manome rakitra matanjaka sy malefaka ho an'ny endrika hita miharihary. Ireo gelatin ireo dia novolavolaina hihaona amin'ireo masontsivana henjana.
Ankoatry ny fisehoana manjelanjelatra, ny fiainana-talantalan'ny vokatray no lava indrindra any Shina; Tsy ilaina ny manampy preservative ataon'ny mpanjifanay raha ampiasaina amin'ny tontolon'ny famokarana GMP ny Yasin Gelatin.
Yasin Gelatin dia mahafeno fari-pitsipika an-kalitao manan-kery ary indrindra ny zavatra ilaina amin'ny fanafody toy ny nofaritan'ny USP, EP na JP.
Ao amin'ny takelaka, Gelatin dia mpamatotra voajanahary, mifehy ary manaparitaka voajanahary izay mahafeno ny fepetra takian'ireo mpanjifa miahiahy momba ny fampiasana akora simika simika. Raha manome fisehoana manjelanjelatra sy takelaka mahafinaritra ny takelaka.